Ihe Iweghachite data. Nweta Lost & Ehichapụ faịlụ.
DataNumen Data Recovery bụ kasị mma data mgbake ngwá ọrụ na ụwa. Ọ nwere ike napụta lost na ehichapụ faịlụ na nchekwa na draịva gị dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na ọdachi data.
4.90 / 5 (site na 1,650 votes)
Gịnị mere DataNumen Data Recovery?
Ngwaahịa gị kacha mma ma mee most! Mana echeghị m na ihe ọ bụla nwere ike ịgbake data m lost. Ọ natara ihe m nwere, nke bụ karịa
Nwanyị Mascha Fujimoto
Họrọ Source Drive ma ọ bụ Disk
Họrọ Iweghachite Nhọrọ
Main Akụkụ na DataNumen Data Recovery v2.4
Kwado ụdị faịlụ faịlụ niile, gụnyere NTFS, Abụba, FAT32 na Ext2.
Nkwado iji naghachi faịlụ lost n'ihi mgbanwe nke ụgbọala, nrụrụ aka nke ụgbọala ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
Nkwado iji weghachite iyi ndị metụtara lost na ihichapụ faịlụ.
Nkwado i scanomi raw disk data kpam kpam ma chọọ lost na faịlụ ehichapụ nke ihe karịrị ụdị 70 a ma ama, site na iji usoro ọkachamara dị n'ime nwere ọtụtụ ihe ọmụma banyere njirimara na nhazi nke nkọwa ụdị faịlụ ahụ.
Nkwado iji gbakee lost na-ehichapụ nchekwa na dum nchekwa hierarChy recursively.
Nkwado Unicode faịlụ aha na aha nchekwa.
Nkwado iji nyo ma dozie lost na-ehichapụ faịlụ na nchekwa dị ka iche iche ibiere.
iji DataNumen Data Recovery iji weghachite faịlụ na draịva gị
Format usoro mbanye gị na ndudue, ị na-kpamkpam ehichapụ faịlụ ma ọ bụ nchekwa site na draịva gị ndudue, ma ọ bụ na ị bupụrụ gị egweri biini tupu ị na-ahụ na e nwere ihe dị mkpa na ya. Gịnị ka ị ga-eme?
Enweghị nchekasị. DataNumen Data Recovery nwere ike inyere gị aka. Can nwere ike iji nke a dị ike iji lelee draịva ahụ, chọọ lost ma hichapụ faịlụ, weghachite ha wee nweta most bara uru data azụ gị.
Nwere ike ịhọrọ draịva ma ọ bụ diski ka a ga-enyocha, wee pịa bọtịnụ "OK" ka starT i scanomi usoro.
Cheta na: Tupu inyocha draịva ma ọ bụ diski, gbaa mbọ hụ na enweghị oghere ma ọ bụ folda dị na draịva ma ọ bụ diski. Enweghị ngwa ndị ọzọ na-abanye na draịvụ ma ọ bụ diski.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịhọrọ ihe nchịkọta nhọrọ ndị a:
ka i scanomi ihe oyiyi faịlụ kama a mbanye ma ọ bụ disk.
I nwekwara ike ịhọrọ ihe a:
imeghe okwu ndia:
na ịtọ Doppler nhọrọ tupu i scanomi usoro.
Mgbe starTing na i scanomi usoro, ọganihu mmanya
ga-egosi na i scanomi ọganihu. N'oge usoro, ị nwere ike pịa
button iji kwụsị i scanomi usoro.
Mgbe i theomi usoro, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla lost ma ehichapụ faịlụ ma ọ bụ folda nwere ike weghachite, ị ga-ahụchalụ faịlụ ndị a:
Lelee faịlụ ma ọ bụ folda ịchọrọ ị gbakee, wee pịa
button, ị ga-ahụ ndị na-esonụ dialog:
You nwere ike ịtọ ndekọ ndekọ na dialog wee pịa "OK" button start na-agbake ihe ndenye.
DataNumen Data Recovery ga-ahụ naghachi niile na-enyocha ihe maka gị. Mgbe mgbake usoro, ndị na-esonụ ozi igbe ga-gbapụta:
Mgbe ahụ ị pụrụ imeghe mmepụta ndekọ na ịnweta niile natara ihe.
DataNumen Data Recovery A na-ahapụ 2.4 na November 9th, 2020
DataNumen Data Recovery A na-ahapụ 2.3 na Eprel 14, 2020
Melite mmetụta ngosi.
DataNumen Data Recovery A na-ahapụ 2.2 na February 28th, 2020
Nkwado ịlele faịlụ nke ọ bụla iji weghachite.
Nkwado imeghari nha ngosipụta nke eserese.
DataNumen Data Recovery A na-ahapụ 2.1 na Jenụwarị 8th, 2020
DataNumen Data Recovery A na-ahapụ 2.0 na Septemba 19, 2019
Rewrite scan na mgbake engine.
DataNumen Data Recovery A tọhapụrụ 1.0 na Disemba 28, 2010
Nkwado niile formats nke draịva.
Naghachi-ehichapụ faịlụ na NTFS draịva.